décembre 2017 - Page 2 sur 76 -
Taona 2017 : Miisa sivy ny trangana kidnapping
Ny 04 janoary no nisian’ity tranga fakana an-keriny ity voalohany, tamin’ity taona ity. Ny DGn’ny Caromad no lasibatra tamin’izany , ka teny amin’ny toeram-piasany teny Tanjombato ity farany no nalain’ireo enin-dahy nirongo basy an-keriny. Raha …Tohiny
Fetin’ny faran-taona : Tsy diso anjara ny fianakaviam-ben’ny zandarimariam-pirenena
Ho fanamarihana ny fetin’ny faran’ny taona 2017, dia nanatanteraka lalao ara-panatanjahan-tena, ny teo anivon’ny “Direction Administrative et Financière”, eo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Nandray anjara tao anatin’izany avokoa ireo sampan-draharaha misy eo anivon’ity vondron-kery ity , ka …Tohiny
Andian-drahona matevina : Ahiana hivadika rivo-doza
Arahimaso akaiky ilay andian-drahona matevina manakaiky an’I Madagasikara amin’izao fotoana izao. Araka ny vaovao farany nomen’ny sampana mpamantatra ny toetr’andro omaly atoandro, any amin’ny 2000 km miala an’I Madagasikara no misy izany andian-drahona izany. Ary …Tohiny
Anisan ‘ny fotoana hijiery todika ny zava bita ny faran ‘ny taona tahaka izao ary anisan ‘ny nanatanteraka izany ny filoham-pirenena, izay nitanisa ny asa vita nandritra ny 12 volana. Ny taona 2017 dia fotoana …Tohiny